XOG: Madaxweyne Lafta-gareen oo khadka telefanka kula hadlay madaxda Puntland & Jubbaland.
January 13, 2021 Xuseen 3
Puntlandtimes (Baydhabo)-Madaxweynaha Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis xasan Maxamed ( laftaagreen) ayaa bilaabay dadaalkiisa ku aadan sidii xal looga gaari lahaa khilaafka arrimaha doorashooyinka ee uu muranka ka taagan yahay.
Madaxweyne laftaagreen oo shalay ku laabtay Baydhabo ayaa waxaa ilo xogagaal ah xaqiijiyeen inuu khadka Telefanka kula hadlay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo ka horyimid waxyaabaha ka socda Muqdisho.
Wararku waxay sheegayaan in Madaxweynaha Koonfur galbeed uu ka dalbaday Madaxweynayaasha Jubbaland & Puntland inay soo magacaabaan guddiyada doorashada Heer Dowlad goboleed kadibna laga wada hadla xal u helista khilaafka doorashada.
Ilaa hadda majirto jawaab ka timid madaxda Jubaland & Puntland ay dalabkaasi ka siiyeen Madaxweynaha Koonfur Galbeed, hayeeshee ay xusid mudan tahay in dalabkaas uu Madaxweynaha Puntland horay uga diiday Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ay ku kulmeen Garoowe.
Laf ga gareen, waxa uu raadinayaa, qalalaasa ka dhaca Somaliya iyo in lagu kala tago, dowladaas dhibaatada laga soo maray. iimaan la,aan baa jirta iyo wadani xumo.
waxan maqlijiray Nin meelu ucadahay meelikamadow Axmed Madoobe Iyo Deni Waxaa dhegahooda kujira oo aan marna ka Bixin Hadalka Kenya iyo Emirate leeyihin Markaa hadalka madaxda somaliyeed leeyihin Kamadow waxana Eeda ugu wayn saarayaaa Odayaal dhaqameedka Somaliyeed oo Shacabka Metela ayaaa Doorkooda Gabay oo Hadalkooda aan marna Runta sheegahayn Danta Shacabka ay metelan
waxba ha ka walwalin doorasho Axmed madoobe iyo Deni ka maqan yihiin xamar kama dhaceyso